Ungayinciphisa Kanjani Imithambo Yakho Yangaphambi Kokuncintisana | UFred Astaire
Ungayisiza Kanjani Imithambo Yakho Yangaphambi Kokuncintisana
Akuvamile, cishe akunakwenzeka, ukuza ngaphesheya komdansi ongesabi ngaphambi kokuncintisana. Izinzwa ziyingxenye yemvelo yokuncintisana, futhi ukubhekana nokwamukela lezo zinzwa kungaba nzima! Nawa amathiphu ambalwa wokukusiza ukuphatha ama-jitters wangaphambi kokusebenza okungenakugwemeka:
Kunzima ukuhlala uthule lapho unovalo! Ukuhambahamba kusiza ukuqeda ezinye izinzwa futhi kukusize ususe ingqondo yakho emncintiswaneni. Ukunyakaza futhi kunciphisa ukungezwani kwemisipha okusiza umzimba ukuthi uzizwe ungakhathazeki kangako.
Zibone ngeso lengqondo wenza inqubo.
Ngaphambi kokuthatha phansi ukuqhudelana, vala amehlo akho bese uthatha umzuzu ukubona isithombe sakho sihamba kahle! Lapho ukwazi ukuzibona ngeso lengqondo ushaya inqubo, wamukela imicabango emihle futhi uxoshe imicabango emibi ekhulisa izinzwa zakho.
Thatha umoya ojulile.
Futhi okubizwa ngokuthi ukuphefumula okugxile, ukuthatha ukuphefumula okuhamba kancane kusiza ukunciphisa izinga lokushaya kwenhliziyo yakho nokulawula izinzwa zakho. Enye yezindlela zokuphefumula ezijulile yi-4x4x4x4; phefumula ngamakhala akho imizuzwana emi-4, uyibambe imizuzwana emi-4, uphefumulele ngaphandle ngomlomo wakho imizuzwana emi-4 bese ubamba ekugcineni komoya imizuzu engu-4. Ukulandela iphethini enjalo kuzonciphisa imiphumela yezinzwa zakho futhi kukusize uzizwe uzolile!
Musa ngaphezulu kokuzijwayeza ngaphambi kokwenza!
Ukugijimisana nomdanso wakho ngaphambi kokuncintisana kuhlale kungumqondo omuhle, kepha qiniseka ukuthi ukujwayeza izikhathi ezi-1 noma ezimbili kuphela. Uma uqhuba umdanso wakho (noma usekhanda lakho noma ugcwele ngokugcwele) kaningi ngaphambi kokuncintisana, ungaqala ukuqagela okwesibili wena, ungeza izinzwa. Qiniseka ngomsebenzi owufakile kuze kube manje futhi uzethembe ukukhumbula inqubo yakho!
Thola isimiso sakho sangaphambi kokusebenza!
Njengoba nje wonke umuntu efunda ngokuhlukile, wonke umuntu uzoba nezindlela zakhe zokudambisa izinzwa zakho. Okukusebenzela kangcono kungenzeka kungasebenzeli umngane wakho noma osebenza naye, futhi lokho kulungile! Lapho usuthole okukusebenzela kangcono, kuzoba lula ukulawula izinzwa zakho.
Akunandaba ukuthi wenzani ukudambisa lawo ma-jitters wangaphambi kokusebenza, kubalulekile ukuthi ungavumeli izinzwa zakho zikuthole okungcono kakhulu! Umncintiswano yisikhathi sokukhombisa umndeni wakho nabangane ukuthi usebenze kanzima kangakanani phakathi nesizini nelinye ithuba lokuthi wenze lokho okuthandayohamba. Ukuze uthole amathiphu amaningi, kanye nemininingwane ngemincintiswano yethu ezayo nokuzilolonga, xhumana ne- wendawo Fred Astaire Dance Studios!